Genuine Engine Oil ကို တကယ်ပဲ သုံးဖို့လိုလို့လား??
လူတွေရှင်သန်လှုပ်ရှားဖို့ ရေဟာအရေးကြီးလှသလို၊ အပင်တွေကနေ လှပတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေပွင့်ဖို့ နေရောင်ခြည်ဟာအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ။ ကားတစ်စီးရဲ့အင်ဂျင်ဟာလည်း သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး နဲ့ရေရှည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ကို အင်ဂျင်ဝိုင်ရဲ့အကာအကွယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကားတစ်စီးအတွက်အင်ဂျင်က ‘’နှလုံး’’ ဖြစ်မည်ဆိုရင် အင်ဂျင်ဝိုင်က ကားရဲ့”အသက်သွေး” ပါ။
· အင်ဂျင်ဝိုင် အမျိုးအစားများစွာရှိ တဲ့ထဲက Genuine အင်ဂျင်ဝိုင် ဆိုတာဘာလဲ?
နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်း တိုင်းတာမှုများအတိုင်း အင်ဂျင်လိုအပ်မှူ့အပေါ်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ Genuine oil ကို အထူးသီးသန့်ထုတ်လုပ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြား အထွေထွေသုံး အင်ဂျင်ဝိုင် များထက် အင်ဂျင် ကို သက်တမ်း ပိုမို ကြာရှည်စေ ပြီး နှင့်အင်ဂျင် စွမ်းဆောင်ရည် ကို လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေ​ပါတယ်. Genuine oilဟာ အင်ဂျင်၏ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တင်းပေးရုံသာမက အင်ဂျင်ကို အသစ်ကဲ့သို့ ဖြစ်အောင် ပြုပြင်မွန်းမံ့ပေးပါတယ် ။
· ဘာကြောင့် Genuine အင်ဂျင်ဝိုင် ကို အသုံးပြုသင့်ပါသလဲ?
Genuine အင်ဂျင်ဝိုင်ဟာကားအင်ဂျင်များကို ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် ဆီစားနှုန်းသက်သာစေခြင်း၊ကားစက်နှိုးပြီးချိန်မှာအင်ဂျင်အတွင်းသို့သန့်စင်သောဆီများဝင်ရောက်ခြင်း ကြောင့်အင်ဂျင်ရဲ့သန့်ရှင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ခြင်း၊အိတ်ဇောမှမီးခိုးအထွက်များခြင်းကိုလျော့ချပေးခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့် ပူသောရာသီဥတုတွင်သာမက အေးသောရာသီဥတုမှာလည်း အင်ဂျင်ကိုချောမွေ့စွာ စက်နှိုးနိုင်ရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင် ပါတယ် ။
· အင်ဂျင်ဝိုင်ကို မှန်မှန်စစ်ဆေး ဖို့ လဲလှယ်ပေး ဖို့ လိုအပ်ပါသ လား?
အင်ဂျင် အသုံးပြုမှုများလာပါက အင်ဂျင်ဝိုင် ရဲ့ စေးပျစ်မှုပျက်ယွင်းလာ တာ ၊ ကာဗွန်နှင့် အင်ဂျင်ဝိုင်အနည်အနှစ်များ အင်ဂျင်ဝိုင်လိုင်းများတွင် စုပြုံလာ တာ ၊ အင်ဂျင်ဝိုင် ကိုလဲလှယ်လဲခြင်းမရှိပဲ ထပ်မံဖြည့်ခြင်းသာဆောင်ရွက်ပါက ကာဗွန်နှင့် အင်ဂျင်ဝိုင်အနည်အနှစ် များကြောင့် အင်ဂျင်ဝိုင် ပျစ်ခဲလာ တာ တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ် ။ဒါကြောင့် အင်ဂျင်ကို ကောင်းမွန်သည့်အခြေအနေအတိုင်း သက်တမ်းကြာရှည်စွာ ထိန်းထားနိုင်ရန် အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးလဲလှယ်သင့်ပါတယ် ။
အင်ဂျင်ဝိုင် ပုံမှန်မလဲပါက အင်ဂျင်ဝိုင်အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်း၊ ချောဆီဂုဏ် သတၱိေလ်ာ့နည္းခြင်း၊ အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်း၊ အဆိုးဆုံးအခြေအနေအဖြစ် အင်ဂျင်ဖမ်းသွားပြီး အင်ဂျင် ပြန်လည်ပြုပြင်ရခြင်းအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ် လာတတ်ပါတယ် ။
အရေးကြီးသောအချက်အနေဖြင့် မသန့်စင်သော အင်ဂျင်ဝိုင်များကိုသုံးမိပါက ကားတွင် ချောဆီညစ်နွမ်း၍ ဆီစစ်များပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဆီအနည်ထိုင်ခြင်းပြဿနာများ၊ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်း ညစ်နွမ်းစေခြင်းဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ် လာတတ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ဓာတ်ဆီ (သို့) ဒီဇယ် ကားများကို ယေဘုယျ အား ဖြင့် ကီလို ၅၀၀၀ ပြည့်လျှင် အင်ဂျင်ဝိုင်စစ်ဆေးပြီး လဲလှယ်မှု ပြုလုပ် သင့်ပါတယ်။
Genuine Engine Oil & Spare Parts
အသစ်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ Covid-19 Delta Varient ဟာအရင် strain တွေထက် အဆပေါင်း များစွာ လျင်မြန်လာပါပြီ။ အရင်ကဆို သတင်းတွေထဲမှာသာမြင်နေကြားနေရပေမဲ့ ဒီတခါမှာတော့ အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်က မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီပါ ကူးစက်နေပြီဆိုတော့ အရင်ကထက် အများကြီး ဂရုတစိုက်နေရပါတော့မယ်။ မိမိ ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ကာကွယ်ဖို့ လိုသလို မိမိရဲ့ ကားအတွင်းပိုင်းရဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာလေးတွေ ကို ဘယ်လိုမျိုး Safely Clean ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးရမလည်း ဆိုတာကို ဝေမျှပေး ချင်ပါတယ်။ Covid - 19 ကပ်ရောဂါကျရောက် နေချိန် ကိုယ့်ကားလေး က ဘယ်ကိုသွားသွား သီးသန့် သွားလာနိုင်ရန် အသုံးပြုရတဲ့ ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး ။ ဒါကြောင့် မိမိ အိမ်အတွင်းပိုင်း ကိုသာမဟုတ်ဘဲ မိမိကားရဲ့ အတွင်းပိုင်းကို လည်း သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ ဘယ်နေရာတွေကိုသန့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါသလဲ။ · အထိအတွေ့များတဲ့ မျက်နှာြပင်များကို သန့်ရှင်းပေးရပါမယ်။ · အတွင်း အပြင် ကားလက်ကိုင်များ၊ စတီယာရင်လက်ကိုင်၊ · ဂီယာ shift ၊ · Wipers အတင်အချ levers ၊ · Radio, CD,DVD,TV and Climate Control များရဲ့ မျက်နှာပြင် နှင့် ခလုတ်များ၊ · ကားထိ